I-ecoescape: ikhaya elincane elizimele ngaphandle kwegridi - I-Airbnb
I-ecoescape: ikhaya elincane elizimele ngaphandle kwegridi
358 okushiwo abanye
Korito, Taranaki, i-New Zealand
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Edward
U-Edward Ungumbungazi ovelele
Sawubona, ngingu-Edward! hlola i-insta yethu @ecoescape ukuthola izithombe eziningi + imininingwane! Lokhu kuphunyuka kuyindlu encane eyizingxenye ezi-2 ebekwe phansi kweTaranaki enokubukwa kwezintaba okungenakuqhathaniswa. Amaminithi angu-15 ukusuka edolobheni kanye nolwandle, ukujikijela kwetshe entabeni kanye nokulandela ibhayisikili leli khaya elincane elizimele liyindawo ekahle yalabo abafisa ukuvakashela e-Taranaki ukuze bathole i-adventure noma baphumule. Inikwe amandla ngawo womabili amaphaneli elanga nama-hydro turbines, le ndawo "ingaphandle kwegridi" njengoba itholaka.
Endaweni ebanzi (ikhaya labazali bami kanye nebhizinisi) kunechibi elinama-kayak, izilwane zasemapulazini, isikebhe esigwedlwayo, izikelemu ezikhanyayo, izingadi, izindlela zokuhamba konke okutholakalayo ukuze uzihlole futhi uzisebenzise.
Senza konke okusemandleni ethu ukuze sikwazi ukuzimela futhi sizinze ngakho-ke sibe nezingadi zokukhiqiza ukudla kwethu. Ngesikhathi sokunala, isivakashi sikhululekile ukuya engadini - vele ubuze uLinda kuqala. Sizama konke okusemandleni ethu ukuphinda sisebenzise okuningi ngendlela esingakwazi ngayo, ngakho-ke sicela usisize ekwenzeni kanjalo.
Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe sicela uhlole ikhasi le-Instagram: @ecoescape
Omunye wemibhede ukhuphuke ngesitebhisi esiqondile endaweni ephezulu, lo mbhede ulungele kuphela labo abafanele futhi abakwazi ukugibela phezulu naphansi.
Zonke izindawo ezingaphandle zivuliwe ukuze izivakashi zivakashe.
Izingane ezincane kumele zigadwe ngaso sonke isikhathi njengoba izilwane zasechibini, emifudlaneni nasepulazini kuyingozi engenzeka yokuphepha.
Izindlela zokuhamba zasehlathini zingashelela kakhulu uma zimanzi, ngakho ngicela uhambe ngokucophelela futhi ungagijimi.
4.96 out of 5 stars from 358 reviews
4.96 · 358 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-358
Indawo yasemakhaya, kufanele ubheke ukuze ubone ezinye izakhiwo.
Uma udinga usizo, ungabi namahloni - vele ubuze. UMichael (ubaba) uvame ukuba sekhaya (uqhele ngamamitha angu-200) futhi ujwayele ukucasha ehhovisi lakhe elisayinwe ngokucacile.
UEdward Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Korito namaphethelo